शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक: नेता पुन – Himalaya Times ।। One of the leading Newspaper in Nepal is Himalaya times. The online portal of ehimalayatimes.com
जोकोभिच अन्तिम आठमा
पर्यटन उद्योग पुनरुत्थानमा लागि आन्तरिक पर्यटन
धन चामल उत्पादन, आयात तथा निकासी
वैदेशिक रोजगारी : यूकेमा मौसमी रोजगारीका लागि हुन्छ यस्तो खर्च
पुस्तक : जापानमा नेपाली कुकका कथा
सिड्नीमा बाढीको कहरः एक जनाको मृत्यु, हजारौँलाई घर छाड्न भनियो
भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै सिटिइभिटी, कलेजको अपग्रेडिङ गर्न सदस्य सचिव नै
शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक: नेता पुन
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १५:३६
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले शिक्षाको लागि देश बाहिर पुग्ने रकम रोक्नलाई देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आ.व. २०७९/०८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिदै सांसद पुनले विदेश पढ्न जानेले पैसा लिएर जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशमा गुणस्तरीय शिक्षा भएमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षामा विदेश गएको रकम गत वर्ष २१ अर्ब रहेछ । यो वर्ष त्यो बढेर २४ अर्ब पुगेको छ । पढ्न जानेले लिएर जाने पैसा मात्रै । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अलिकती समस्या त्यसले पनि पारेको छ । माध्यामिक तहमा हाम्रो गुणस्तरीय भयो । विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने बित्तिकै हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत धेरै कुरा एकै साथ सुधार गर्छ । यस खालका रणनीतिक क्षेत्रहरुमा सरकारको ध्यान जानेछ । आगामी बजेटमा यस क्षेत्रमा ध्यान जानेछ ।’
प्रदेशमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न एमालेले तोक्यो
फाइदा पुग्ने दलसँग गठबन्धन गर्ने लोसपाको
पाँच दलीय गठबन्धन आगामी चुनावसम्म नरहने
कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा पदाधिकारी बैठक आह्वान
एमाले सचिवालय : निर्वाचनमा अन्तरघातको छानबिन
प्रधानमन्त्री ‘अनिच्छुक’ देखिएपछि तत्काललाई
२७ दिनपछि तोडियो निहारिकाको
आदर्श लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा